Dakhsi Ururay Haan ma Bujiyo, Kooxda Khaatumo-xun ma Fashilin Karto Halganka Qaangaadhay ee JWXO – Rasaasa News
Jun 25, 2009 Jwxo-shiilada
Marka shay ama xaalad aloosan oo addag la cabirayo, waxaa la yidhaahdaa waxaa dabagal iyo u kuurgal lagu sameeyaa waxyaabihii hore ee dhici jiray ee sooyaal taariikheedka aduunka u ahaa…….
Hadaba kooxdan khaatumo xun ee nacladu ku dhacdey ee uu darawalka u yahay Ina Cumar Cismaan [JWXO-shiil] dadkii aqoon jirey waagii uu shuuciyada u qaabilsanaa maamulkii siyaad Barena u yaqaaneen NAAGTIISU DHAANTEY, waxa ay manta u keeneen umadii Soomaalida ogadeniya in uu ka bilowdo civil-war ama dagaal sokooye kaas oo ka bilowdey dilkii Mujaahid Marxuum Dr. Doolaal iyo iyaga oo sameystey webab ama shabakado wax lagaga sheego culimo awdiinka, aqoon yahanka, Hooyooyinka, Ugaasyada iyo dhamaan noocyada kala duwan ee bulshada.
Waxa uu kula dardaarmey niman khaas ah oo awr-kiraalayaal u ah isaga [Jwxo-shiil ama naagtiisu Dhaantey] kooxdaas oo ay ka mid yihiin Xussein Nuur [BUCUUDO ama Murtad] diinta islaamkana mudo 15 sanno ah ka ridoobey oo xiligii burburka soomaaliya dib ugu soo noqdey in uu markale qiro jiritaanka tiirarka islaamka, Maxamuud Garaabo, Cali yare saliid, Cabdi-Dheere BUUBAA, Xussein Mataan [SHUKUMAAN] iyo Habar iyadu cantatabtey oo la wada yiraahdo Cambaro-Dheer oo iyada
u iney suuqa maryaha dhigato u taagan oo aan garaneynin waxa ay ku hadleyso iyo waxa ay ka hadleyso toona. Hadaba maxaa ka dhashey qorshayaasha burburinta halganka ah ee Ina cumar cismaan iyo kooxdan Cawrada ku ah jiritaanka halganka xaqa ah ee Ogadeniya isla gaadheen .
1. Heshiis hoosaad iyo wada shaqeyn kaligii taliye Malise ay la sameeyesteen kooxdan cawro oo Markii ay arkeen in shacabweynaha soomaalida Ogadeniya fahmeen qabyaalada, kala qeybinta, hoos isudilka jabhada ku badatey, iyo lunsiga dhaqaale ee joogtada ah, waxaa u soo baxdey Ina cumar cismaan iyo maxamed Ismaaciil [QAAXO] sidda kaliya ee ay ku badbaadi karaan iney tahay iney kala qeybiyaan jabhada xaq u dirirka ah ee JWXO iyaga oo bilaabey iney xidhiidh toos ah la sameeyaan Kaligii taliye Malise zenawi iyaga oo u sii maraya Cabdi Ileey iyo Ina Macalin Ilyas; dad xog ogaala ah oo aanaan magacooda sheegeynin xiliggan oo ah illo lagu kalsoon yahay ayaa noo cadeeyey in xidhiidhka Mahamed Ismaaciil[QAAXO] iyo KT Zenawi uu sameeyey Cabdi illeey halka mahamed Cumar cismaan [JWXO-Shiil ama Naagtiisu Dhaantey] uu u sameeyey danbiile caan ah oo horey qoryo jabhadu laheyd u dhacay oo taksiile ka ah Chicago laguna magacaabo Mahamed Rashiid. Ninkan taksiilaha ka ah Chicago ee lagu magacaabo mahamed rashiid ayaa isagu horey danbi lunsasho hub jabhadu laheyd ah u galey hadana ah wadada isku xidha tigreega iyo NAAGTIISU Dhaantey ama JWXO-SHIIL.
Mahamed rashiid waxa uu Abti u yahay oo waliba wadanka uu keenay INA MACALIN ILYAAS. Wiilkaas oo ah fariinqaadaha tooska ugu xidhan ee ay had iyo goor marto fariinta Mahamed Cumar “Naagtiisu dhaantey.” Illo qarsoodi ah oo uu ku kalsoon yahay oo ah qaraabadiisa ayuu u xaqiijiyey xidhiidhkaas isaga Ethiopia ka dhexeeya; Arinkan oo in badan shacabka soomaalida ogadenia shaki kaga jirey ayaa banaanka u soo baxay, JWXO-Shiil waxuu u sheegay shaqsiyaalkan sirta fashiley ee qaraabadiisa ah in ayna suurto gal aheyn in wadankeenu Ethiopia ka xoroobi Karin danta umaduna tahay nabad. Shakigaas oo ahaa inuu doonayo Ina cumar Cismaan inuu kala diro JWXO inta tabartiisa ah ayaa maalinba maalinta ka danbeysa soo if baxeysa. Waxaase wali wax laga yaabo ah kuwa qabyaalda iyo naceyb ay shaqsiyaad kale ama reero Ogaden ah u qabaan wali u sii daba socda ninkan daneystey ee cadowgii umada heshiiska kula galey baa’bi inta halganka. Kuwaas waxaan anigu ku odhan lahaa waxey ku sifoobeen maah-maahdii soomaaliyeed ee aheyd dhalaanku haddii aad kuftana wey kugu qoslaan haddi ay kufaana wey kugu ooyaan.
2. Iska horkeenid Soomaalidii Xorta aheyd iyo shacabweynaha Ogadeniya siiba JWXO Waxaan la wada soconaa meesha ay manta mareyso xaalada guud ee dalkeenii hooyo. Go’doon dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid horumar ayuu cadawga madow ee Abisiiniya ku soo rogey muddo hada laga joogo 2 sanno. Dadka soomaalida ogadeniya waxa uu xidhiidh fiican oo taariikhi ah la lahaa walaalahooda soomaaliyeed ee dariska la ah. Waxaan wada ogsoonahay in gobolada dalka soomaaliya oo dhan marka laga reebo Maamulka Hargeysa iyo Maamulka Garoowe in laga taageersanaa halganka shacabka soomaalida Ogadenia. Hadaba suaasha isweydiinta leh waxa ay tahay maxaa ku dhacey xidhiidhkii taariikhiga ahaa? Yaa mas’uul ka ah hoos u dhacan yimid? Maxaa sal u ah in manta shaqsi sheegan kara ONLF aan lagu arki Karin Soomaaliya guud ahaan? Maxaa dhacey? Xagee bey sartu ka qudhuntey?
Haddii aan ka jawaabno su’aalaha qaarkood aniga oo ku saleynaya ururin xog iyo daliil cad waxaan u kala qaadi doonaa dhowr arimood oo is burinaya.
Kooxdan Khaatumo xun oo daba-dhilif u noqotey Kaligii taliye Maliz zenawi. Si fiicana u dhuux qoraalada siyaasadeed ee kooxdan sii burbureysa ee khaatumo xun, ee uu qorey ina Maadey oo uu ku taageerayo Sheekh Shariif madaxweynanimadiisa. Waxa shacabka soomalida ogadeniya isweydiiyeen farqiga u dhaxeeya Shariifka, cabdullaahi yuusuf iyo Daa’uud Axmaar. Waxaa u cadaatey soomaalidii caawin jirtey halgankeena ee xeebahooda, magaalooyinkooda iyo garoomadooda inoo ogolaan jirtey iney manta ugaadhsanayaan dhaawaceenii iyo dadkii ka soo cararey dhibaatada guumeysiga. Sababtuna ay tahay in JWXO-shiil gatey qadiyadii ogadeniya waa sidda uu isagu isleeyahaye.
Isaga oo ay iskaashanayan ciidamada dabaqoodhiga ee cabdi illeey Waxa uu dagaal la galey CWXO ee ka soo horjeestey hogaankiisa qabyaaladu ku xaarxaartey iyo JXSG. Arinkan isaga ah ayaa u cadeeyey dhamaan dadweynaha ogadeniya oo dhan waa arinta keentey inuusan ku soo dhex noqonin shacabka soomaalida ogadeniya.
Waxa uu sameystey shaqsiyaal kabaqaad u ah oo ku raacey qabyaalad iyo naceyb qoys.
Haddaba dadkan aan ka hadlayo waa kuwo caan ku ah dhagaha shacabka oo aan sumcad ku leheyn bulshada dhexdeeda. Nimankan iyaga ah oo markii hore ku gaban jirey magac jabhadeed ayey ka soo xidhantey wadadaasi, ayaa waxa ay hadda ku meereysanayaan qabiil shirin iyo maxuu reer hebel inaga damacsan yahay. Shirarka hoos-hoose ee Huuraale Garaabo iyo Hussein Shukumaan abaabuleen iyo mid waliba meesha uu ku danbeeyey gadaal ayaan idinka soo sheegi doonaa. Waxaa dhameystir ah taariikh dheer oo Shukumaan aan ka heyno iyo Danbiyo Dil, Xadhig iyo Jidh-dil isugu jira oo uu u geystey shaqsiyaal Soomaalida Ogadeniya ah iyo soomaalida kalleba waagii uu ahaa xeer ilaaliyaha Dawladii burburtey arinkaas oo dhameystirana dadweynaha waa loo soo bandhigi doonaa.
Wax yeelada iyo kala geynta bulshada ee Shukumaan, Garaabo, Buubaa, Hilible, iyo Saliid mid mid ayaan ugu soo qaadan doonaa qormooyinka danbe ee soo socda haddii eebe idmo.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa qormadan manta qeyb ka mid h gabeygii TUUG BAROOLE
Baranmaysid Soomaaliyeey Tuug Baroolaha e
Sidii ruux barii’uu dushaa uga bidhaamaaye
Bashar iyo qof saaxiib ah baad bilicda mooddaaye
Mar waa sheekh billaahida maroo diinta kaa badine
Marna waa basaas horor ah oon baab xidhaa jirine
Boqor iyo suldaan buu noqdaa beelo daaja ahe
Baryo wuxuu iskaga kaa dhigaa Naasax beer nugule
Waa baxar sitiin aan lahayn baasaboor mida e
Kolba boqol ilood buu middood kuula soo bixiye
Sidi ruux baldo u dhoofayuu boorsa weyn yahaye
Danta inuu badbaada u yahuu ba’uhu sheegtaaye
Bidix iyo markuu midig dayee kaa bogsado shiishka
Billaawaha wuxuu kaa marshaa meesha baydda ahe
Note: qormooyinka soo socda waxaad ka heli doontaan qoraalo xiise leh oo aan kaga faaloon doono damiilayaasha ku dhexdhuumanaya shacabka ee dhabarkoodu muuqdo ee moodaya inaan la arag.
Qoraaga iyo Aragtidiisa